postmarketOS v21.06 Service Pack 3 inounza dingindira rayo kuGTK3 uye GTK4 | Linux Vakapindwa muropa
Ini, ndakave nePineTab kweinopfuura gore, ndinoziva kunonoka kukura kweanoshanda masystem masisitimu akavakirwa neLinux (Android padivi) iri kuenda. Chikamu ndechekuti ini ndoda kuwona chimwe chinhu chingashande se "Mazuva ese Dhiraivha", ndiko kuti, sisitimu inoshanda iyo ingaite kuti ndinzwe kuti kushandisa iyo PineTab sezvandinoita neangu iPad, kuchengetedza daro, zvinogoneka. Kune zvikwata zvakawanda zviri kutevera nzira yavo, uye chimwe chazvo ndicho chinotanga postmarketOS.
Maawa mashoma apfuura isu tinowanikwa el Service Pack 3 ye postmarketOSOS v21.06, uye yakauya neshanduko dzisingakwezve kutarisisa. Sezvo isu tichigara tichitaura, chinhu chiri nyore kuona ndiko shanduko mune inoenderana, uye nekubuditswa uku, postmarketos-theme inogona kuiswa kuti uwane iyo GTK 3 uye GTK 4 madingindira kubva ku postmarketOS.
Chii chitsva mu postmarketOS v21.06 Service Pack 3
Sxmo 1.5.2 - Semazuva ese, iyo postmarketOS timu yakabatana pamwe neSxmo timu izvo zvinofanirwa kunge zviri mubasa rekurongedza uye nekutenda kumasekondi, Sxmo 1.5.2 yakaunzwa zvinobudirira. Iyi vhezheni 1.5.1 yakaedzwa kubva pakutanga, iine zvidiki zvekuwedzera zvigadziriso.
Tweaks 0.8.1 ine ruzha rutsva panhare, zvirinani kutsigira notch, kumwe kugadziriswa kweiyo daemon yekumashure, uye yakatarwa yekubata kubata mune nharembozha.
linux-postmarketos-qcom-sdm845 5.14 inovandudza zviteshi zveOnePlus 6 ne6T: pakati pezvimwe zvigadziriso, inotumira rutsigiro rwekutanga modem uye nekuwedzera kuita kweGPU.
ModemManager 1.18.2 yaidikanwa kutsigirwa kwemodem mune SDM845 kernel. Seyakanaka kubatsirwa iyo inofanirwa kuvandudza kufona uye kubata kweSMS.
NetworkManager 1.32.10 yakaiswa kumashure kuti igadzire hotspot mashandiro apo firewall iripo.
Postmarketos-theme inogona kuiswa kuti uwane postmarketOS GTK 3 uye GTK 4 madingindira (ona mufananidzo).
MuServide Pack 2 yakaunzwa Phosh 0.12.1, uye ndeyekuti postmarketOS inobvumidza kuisa akasiyana maficha, pakati ayo ari Plasma. Iyo inokanganisa ndeyekuti iyo KDE nharaunda iri kure nekukwana pane zvekubata zvishandiso. Nhau dzatinofanira kugara nadzo ndedzekuti, kunyangwe zvichinonoka, nharembozha Linux inoenderera mberi nekuvandudzwa kwayo mumapurojekiti akasiyana asina kusiiwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » postmarketOS v21.06 Service Pack 3 inounza dingindira rayo kuGTK3 uye GTK4, pakati pezvimwe zvinhu zvitsva
Kutenda neruzivo, chokwadi ndechekuti kune mashoma kwazvo mablog muSpanish ayo anotaura nezvenyaya yeLinux pane nhare, inokosheswa, maita basa :)
Lutris 0.5.9 anosvika nerutsigiro rwe AMD FSR, DLSS, gamescope nezvimwe